सिल पाउ फारपुले सिल पाउ, बोक हाइ बुरकेलि बोक हाइ : गुनासो, खुशी र विदाइको अविस्मरणीय क्षण - Sunuwar.org
मेरो किरात मुन्धुम मिथक पढ्नु भयो ? सोधनी भयो ।
दिएको भए पो पढ्नु, मैले जवाफ दिएँ । उक्त शिर्षकको पुस्तक लेख्न मलाई पनि कोइँच मुक्दुममा उत्पत्तिको कथा मगनी भएको थियो । धेरै पटकको अनुरोध पछि बल्ला एकसय शब्दको एक पन्ना संक्षिप्त कथा लेखी पठाएको थिएँ । समेटिएन उनको रिसर्चमा । शायद उनीको रिसर्चलाई चाहिने सूचना भएन क्यारे ।
तपाईँ त कोइँचको डब्लुटिओ रे नि ? तपाईले त पढ्नै परेउ नि भनेर उनको किताव दिए ।
थाहा पाइ हाल्नु भएकै रहेछ । किन्ने चलन चाहिँ छैन नि भन्दै उनको पुस्तक सहर्ष लिएँ ।
साँच्ची नै केही वर्षदेखि कोइँचकै लागि समय खर्चिए छ । यस अवधिमा कोइँच लोः मा पुस्तक, पत्रपत्रिका, रेडियो कार्यक्रम, भिडियो गीति एल्बम, पाठ्यपुस्तक, अनौपचारिक पाठ्यपुस्तक निक्लीए । कोइँच भेषभूषाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न सकियो । अर्थात भेषभूषाको जगेर्ना गर्न सकिएछ । कोइँचको चाडपर्वलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकिएछ । देशविदेशमा वहस चलाउन सकियो र कोइँचलाई अब राजनीतिक पार्टीहरुले पनि झिनोरुपमै भए पनि सम्बोधन गर्न वाध्य बनाइयो । माओवादीको घोषणा पत्र लगायत संविधान सभामा सुनुवार स्वायत्त क्षेत्र उल्लेख हुनु एक उपलब्धि मान्नु पर्दछ ।
यस वर्षमा पनि काठमाडौं उपत्यका छाडेर कोइँच (सुनुवार) भूमिमा कुद्नु परेउ ।
यही फागुन १५ गते गोकुलगंगा उच्चा मावि राशनाइलुको उद्घाटन कार्यक्रम सकेर मन्थली लागियो अँधेरोमा कच्ची पक्की बाटाहरुलाई अन्धाधुन्ध पच्छाउँदै । ३.३० मा राशनाइलुबाट बाटो लागेका हामी सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष मनप्रसाद सुनुवार र म बेलुकी ९ बजे मन्थली पुगियो १६ गतेको सुनुवार सेवा समाज प्रथम रामेछाप जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी हुन । विभिन्न १३ गाउँबाट गाजाबाजासहित सम्मेलनमा आएको कोइँचहरुले नयाँ बसपार्कबाट आफ्नो झाँकी प्रदर्शनी गर्दै देवकोटा चोकबाट घुमेर रामेछाप जिविस हलको प्राङ्गणमा आएर सभामा परिणत भयो । रामेछाप जिल्लाको पुरानो नाम लेङलेङ हो । यसो भनौं रामेछापलाई कोइँचहरुले लेङलेङ भन्दाछन् । अभैm पनि विवाहमा सेउली सिलोक गाउँदा लेङलेङ खानीकी फलामकी बन्दुक … गाउँदै आइएको छ ।
सभा भन्ने वित्तिकै सबैको मनमस्तिष्कमा अमिट छाप बसेकै कुरा हो भाषण हुन्छ नै अनि नाचगान, कविता बाचन, हाँस्यव्यङ्ग्य पनि । हो, सुनुवार सेवा समाज रामेछाप जिल्ला सम्मेलनमा ती सबै कुरा भए तर अलिकति आफ्नत्व थियो त्यो सम्मेलन कोइँचको लागि । त्यहाँ कोइँचको हकअधिकारको बारेमा चर्का भाषाण थिए, राजनीतिक पार्टीलाई गाली गरिएको थियो, सरकारलाई चुनौति दिइएको थियो र कोइँच नृत्य, कोइँच गायन प्रस्तुति गरिएको थियो । दर्शक भने विभिन्न जातजाति थिए । कोइँच भुषभूषामा सजिएको रेश्मा र कोइँच गीत मात्र गाएका शिव मुखियाको स्वरले गैर कोइँचलाई पनि लट्ठाएको थियो । मन थाम्न नसकेर कोइँचको हुलमा नाच्न पसेका खस बाहुन दर्शकहरु कोइँच भेषभूषा लगाएर नाचेका कोइँच युवायुवतीहरुको वीचमा कागको हुलमा बकुल्ला भैंm देखिन्थे ।
उद्घाटन समारोह सकियो । तर गाउँ गाउँबाट आएका कोइँच युवायुवतीहरुलाई कोइँचको बास्साइ बाजा, टुङ्नामा नाच्न नपाएर मन दुःखेको थिए छ क्यार । हामी बसेको तीनतले लजमा जम्म भए प्लेतति, दुरागाउँ, बिजुलकोट, सैपुका युवायुवतीहरु । आपसी चिनजानको कार्यक्रम र मनमा लागेको कुरा बाँढ्नैक्रममै रातको १२ बज्यो । त्यसै मन मारेर छुट्टियौं ननाची । सँगैका साथीहरुले नाच्न नपाएकोमा मन खल्लो र थकथकी माने । भोलि पल्ट फागुन १७ गते दिनभरि खाना पनि नखाई रामेछापको जुनारको रस र एक प्याकेट कोकोनट विस्कुटको भरमा बेलुकी सात बजेसम्म बसेर बन्दसत्रबाट नयाँ कार्यसमितिको चयन गरीसकेपछि छुट्टी मिल्यो । हामी बुजिच साङखु, निक्थुँ मुलिच (मनप्रसाद सुनुवार), फत्तमाया थुङ्गुच सुनुवार, म भने वल्लो किरात संघीय राज्य परिषदको रामेछाप जिल्ला तदर्थ समितिको गठन गर्नेक्रममा हामी वस्ने तीनतले लजमै व्यस्त भयौं । अन्य साथीहरु बसपार्क झरेछन् । बुजिच साङ्खुले बसपार्क जाने कुरा गरे । कोरमोच पाम र याअ्ता ओकेशलाई फोन गरे । उनीहरुले आउनु भन्ने सूचना दिए । रातको ९ बजेको थियो । दिनभरीको थकान नजाने शर्तमा हामी खाना लाग्यौं । फत्तमायालाई खाना खाँदा खाँदै फोन आयो लौ आउनु परेउ भन्ने । बस पार्क लाग्र्यौ । प्लेतति शेमशेमकै एक शेर्पाको होटल रहेछ । त्यहीँ हामी जम्मा भयौं प्लेततिका कलाकारसँग राशनाइलु, गुप्तेश्वर र फर्पुका साथीहरु । अनि शुरु भयो बस्साइ बाजाको नाचमा जुवारी, सिल्पाउवु फारपुले सिलपाउ । बोक हाइ बुरकेली बोक हाइ ।
चकामन्न रात । एउटा जस्ताले छाएको छाप्रो होटल । अटाइ नअटाइ बसेका हामी । जोश उत्मुक्त थियो । कोइँच आम छोरीचेली र दाजुभाइ, बुबाहरु, थरिकुति पनि । प्लेततिकै सुनुवार कलाकार तथा चलचित्रकर्मी समाजका गाउँ समितिका सल्लाहकार गोविन्दले मच्ची मच्ची बास्साइ बाजा बजाउँदै नाचेका थिए । साथमा फारपुका अमृत सुनुवार जो सुनुवार कलाकार तथा चलचित्रकर्मी समाज केन्द्रीय अध्यक्ष हुन नाचीरहेका थिए ।
बुर खामे ब्लाजफिल जाइ मिनु
तेङा ठुले तेङा गो
लेङलेङ रागिमि ग्लुमशामिन
रिमाचेमा पाइ मिनु
सिल पाउ फारपुले सिलपाउ
सिलपाउ फारपुले सिलपाउ
प्लेतति (प्रिती) का तामिसामिले सोधे परिचयको लागि ।
ताँबे दिःमि बुर्के हो
मेकेन जन्मेशा हुर्केशो
मेकोन जन्मेशा हुर्केशो
बामना याअ्ता गो नाङा
जोलफे लोः काइ मापाङा
बुर्केका ओकेश याअ्तासँग प्लेततिका छोरीचेली वीच घमासन जुहारी चल्यो ।
रात छिप्पीँदै थियो । जुहारी चर्किँदै थियो । हाँसो गुञ्जनले बसपार्क पुरै थर्काएको थियो । गस्तीमा हिँडेका प्रहरीले पनि ढोकाबाट चिहाएर बाटो लागेका थिए । जुहारी चेलेको चल्यै थियो । वाः प्लुत फारपुले वाः प्लुत । बोक हाइ बुरकेली बोक हाइ । दात हाइ फारपुले दात हाइ ।
अभैm पनि कोइँच युवायुवतिहरुलाई रमाइलो गर्न फिलिम, नाटक, स्टेज शोले सकेको रहेन छ । र, हामीलाई पनि त्यो प्रत्यक्ष उत्तेजक जोश जाँगरले रातोपिरो भएर पूर्व बल प्रयोग गरेर गाएको जुहारी गीतले दिन भरी थकान हरण गरेको थियो । बस्साइ बाजा कहिले ललितपुर जिल्लाको सुसेस कोषाध्यक्ष श्याम सुनुवार, जो प्लेततिकै हुन्ले बजाउँथे भने कहिले सञ्जीव सुनुवार, सुसेस अध्यक्ष प्रिती गाउँ समिति, ले बजाउँथे । सुसेस अध्यक्ष र सुसेस जिल्ला सदस्य कृष्ण सुनुवार औषधि खानु पर्ने भन्दै १२ बजे निस्किए । जुहारी चलेको चल्यै गरेउ । रमाइलो गर्ने कुनै सिमा थिएन । कसैको प्रवाह थिएन तर आफ्नो कर्तव्यबाट कोही पनि च्युत थिएनन् । त्यो रमाइलोमा कुनै स्वार्थ थिएन न त कुनै षडयन्त्र । त्यो रमाइलो दुई दिने भेटघाटको विदावरीको रमाइलो थियो । यसैले कसैलाई कुनै दुःखेशो थिएन । थियो, त प्रितीका साथीहरुलाई एउटै गुनासो थियो, कोइँचको पहिचानको लागि भेषभूषासहित कोइँच गीत, नृत्यसहितको झाँकी प्रदर्शनी गर्ने क्रममा जहिले पनि सम्झिन्छन् प्रिती र गुप्तेश्वरलाई । जहाँ पनि हामीले कोइँचको सन्दर्भ सामाग्रीहरु जुटाइदिनु पर्ने तर हामीले माग गरेको अध्यक्ष र सचिव पदमा भने साथीहरुले सर्वसम्मति जनाउन सकेनन् । योगदानको कदर गर्नमा साथीहरु चुके । तर ठिकै छ, साथीहरुले कोइँचको पहिचान जोगाउन र उनीहरुको हकहितको लागि जनवाकलता गर्न नचुकुन ।
रात छिप्पीँदै जाँदा होटल साहुलाई घरपेटीको दबाब बढ्दै गयो । हामीले समस्यालाई बुझी दियौं । होटलबाट बाहिरियौं श्याम सुनुवारको बास्साइ बाजाको मधुर धुनको विसाउनीमा । तर होटलबाट निस्कीए पनि विदावारीमा हत्तापत्ति मनले छुट्न मानेन । झण्डै आधाघण्टा सडकमै रमाइलो भयो । कुराकानी भयो । एक अविस्मरणीय क्षण बोकेर हामी आआफ्नो बासबस्न विदावरी भयौं फेरि अर्को त्यस्तै कुनै रमाइलो सभा, समारोह, उत्सव र कार्यक्रमहरुमा । समयको क्रमसँग एकराते जात्र बन्द हुँदै गए पनि त्यसको धङधङी यस्तै महोत्सवले पुरा गर्दै आएको छ । फेरि बास्साइ बाजा र टुङ्ना जुहारीले मौलाउने मौका पाएको छ । केही खुशी, केही गुनासो, विदावारीको यो अविस्मरणीय क्षण कानमा अभैm गुञ्जीरहेको छ, सिल पाउ फारपुले सिलपाउ, बोक हाइ बुरकेली बोक हाइ ।
« ऐतिहासिक सम्मेलन : पहिचानको राजनीतिमा प्रतिवद्ध सुनुवार सेवा समाज
रामेछाप जिल्ला समिति सुनुवार सेवा समाजको प्रथम जिल्ला सम्मेलनका झलकहरु »
2 Comments to सिल पाउ फारपुले सिल पाउ, बोक हाइ बुरकेलि बोक हाइ : गुनासो, खुशी र विदाइको अविस्मरणीय क्षण
उकुसु का धेरै लेखहरू पढेकै हुं , जसमध्य अजकेा येा लेख बास्तबमै भिन्न र उत्साह जनक पायेँ ।यस लेखकेा लागि उकसु जिलाइ मुरिमुरि बधाइ र घन्याबाद , बास्तबमा यात्रा संस्मरन प्रस्तुत गर्न जति गारेा छ। त्यतिनै पढनेलाइ मजा अाउछ । यस बिधामा बिरलै कलम चलाउने काःतिच यस पल्ट खरेा उत्रेकेामा खुसित छँदै छु कति ?यसकेा सिमा ममा रहेन । अन्तमा नयाँ कार्यसमितिलाइ कार्यकालकेा सफलता केा शुभकामना ।